Toyota Hilux Revo 2016 (#498983) ကို Ahlone မြို့နယ်တွင်ေ... | CarsDB
450 Lakh Licence အခြေအနေ
2017-01-17 15:44:39 +0630
TOYOTA HILUX REVO Engine power Diesel 2500cc Type. Smart cab Gear. Manual6speed Model. 2016 brand new Equipment. PS,PW,ABS,Airbags ,Streeing Volume control, Etc.. Price 435 lakhs (အမည်ပေါက်ရမည်) Contact. 012304628,095156549 ,09421118111 ကားအလွန်ကောင်း အလွန်သန့်ပါသည်။ *** CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိင်ပါသည်။***